ခေတ်သစ်ဧည့်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းအတွက်စတိုင်, အိပ်ခန်း, ရေချိုးခန်း, မီးဖိုချောင်
အတွင်းပိုင်းအတွက်ခေတ်မီစတိုင် - အလှဆင်လျှို့ဝှက်ချက်များ, ပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်အဆင်ပြေအိမ်သူအိမ်သား
နှစ်ဆယ်ရာစုတှငျလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တက်ကြွသော, ချိုသောနှင့်အတွင်းပိုင်း၏ခေတ်သစ်စတိုင်လ်အတွက်အောင်မြင်မှုအယောင်ဆောင်လူတို့အဘို့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏အာကာသအတွင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခစျြတဲ့သူအချိန်ကာလနှင့်အတူတက်သိမ်းထားချင်သူများ, တစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုပြီးပြည့်စုံသည်။
အတွင်းပိုင်းအတွက်ခေတ်မီစတိုင်၏အဓိကဆောင်ပုဒ်ဟူသောအသုံးအနှုနျး "ဘာမှထပ်မ" ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအခန်းများပရိဘောဂတစ်နည်းနည်းဖြစ်သင့်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများအားလုံးမှာနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချနေကြသည်။ မဆိုအရာဝတ္ထုသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်နှင့်အခန်းတခန်းထဲမှာအလှဆင် element တွေကိုမကြာခဏ iskusstva.Takoe ဒီဇိုင်းအခန်းအလုပ်လုပ်တယ်များမှာသူ့ကိုမှထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းတော်တော်များများအခြေခံအင်္ဂါရပ်များရှိပြီး:
ပုံစံမျိုးအတွက်အမျိုးမျိုးသော incongruous ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ,
အတွင်းပိုင်းအတွက်ခေတ်မီစတိုင်များစွာကိုဒေသများပါဝင်သည်: အနည်းငယ်မျှသာနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ခေတ်သစ်နဲ့ pop အနုပညာ, ခေတ်ပြိုင်ခနျးနှင့်အခြားသူများ။ သူတို့ထဲကမဆိုတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်စတိုင်လ်အတွက်တိုက်ခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းထွက်အောင်, recreated နိုင်ပါသည်။
မူရင်းနှင့်လှပသော, ဒါပေမယ့်လည်းလက်တွေ့ကျပြီးဆင်ခြင်တုံတရားမသာနေထိုင်နေတဲ့အခန်း, - မဆိုအိမ်ရှင်ကထိုအိမ်၏ "နှလုံး" အောင်ရှာတတ်၏။ ဤသည်အချို့သောဒီဇိုင်းနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ပြီးသွားပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ပြီးကြောင့်မိသားစုတစ်စုလုံးနှစ်ဦးစလုံးကျေနပ်တံ့သောလူနေမှုတစ်ဦးအာကာသ, စုစည်းဖို့ဖြစ်နိုင်, အိမ်တော်ဧည့်သည်များထံသို့ရောက်လာကြ၏။
ဧည့်ခန်း၏နံရံတောက်ပသောအရောင်အဆင်းအတွက်ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။ ဝဲကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များအတွက်အရည်ဝေါလ်ပေပါကိုအသုံးပြုရန် သာ. ကောင်း၏။ ဧည့်ခန်းမှာအသုံးပြုမယ့်ခေတ်မီစတိုင်ရိုးရာနောက်ခံပုံများကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာခဲ့သည်ထက်အများကြီးလျော့နည်းဘုံဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကျက်တင်းမာမှုသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းမှုအဆောက်အဦများလျှောက်ထားနှင့်လိုအပ်ပါကသူတို့ကိုတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်စတိုင်ဇုန်အတွင်းပိုင်းလူနေမှု-ထမင်းစားခန်းခွင့်ပြုမီးမောင်းထိုးပြ။ အလွန့်အလွန်ဖက်ရှင်အသုံးပြုမှုကိုရွာကဒီဒီဇိုင်းကိုအနီးစပ်ဆုံးစေသည်သောသစ်သားထုပ်၏ခန်းမမျက်နှာကျက်များတွင်ဖြစ်လာသည်။
ဧည့်ခန်းပရိဘောဂတှကေိုဖယျရှားမရသင့်ပါတယ်။ ပျော့ပျောင်း - အကောင်းဆုံး option ကို ထောင့်ဆိုဖာ နေရာနိမ့်ဆုံး၎င်းပြင်အရာ, နှင့်ဧည့်သည်များထိုင်ကူညီခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကအိပ်စေလိမျ့မညျ။ ဧည့်ခန်းအဘို့အားလုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများသူတို့ရဲ့အရေပြားအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် udobstvom.Samye လူကြိုက်များရိပ်များမှာ - မီးခိုးရောင်အဖြူ, အဝါနုရောင်ရှိသော, အနက်ရောင်။
မီးဖိုနှင့်အတူခေတ်မီစတိုင်ကအခန်းအတွင်းပိုင်းနေထိုင်သောတင်းကျပ်အနည်းဆုံးနှင့်အတူဂန္စတိုင်တစ်ခုသဟဇာတပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဒြပ်စင်အခန်းထဲမှာနွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်နှင့်မီးဖို၏အပြီးများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများမှဆောင်တတ်၏, နည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကအခန်း၏တပြင်လုံးကိုဒီဇိုင်းအမှန်တကယ်မီးမောင်းထိုးပြပါစေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအိမ်တော်၌, သင်သဘာဝမီးဖို install လုပ်သဖြင့်, တိုက်ခန်းထဲမှာနိုင်သည် - င်း၏လျှပ်စစ်အဆွေတော်။
ဒီစတိုင်အတွက်အိပ်ခန်းကိုဖနျတီးရနျ, သငျသညျတောက်ပသောအရောင်အဆင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများတွေအများကြီးမသုံးသင့်ပါတယ်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သညျငွိမျ, ပဿဒ္ဓိကိုအလေးပေးနှင့်သင့်လျော်သောအရာကြွင်းသမျှကိုအထောက်အကူပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ထဲမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ပွဲချင်းပြီးအလင်းအိမ်နှင့်အတူတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပရိဘောဂ၏အဓိကဒြပ်စင်ကိုဆိုင်းငံ့ရနိုင်မယ့်အိပ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာအံဆွဲများနှင့်ရာဘေးစားပွဲတစ်ဗီရိုသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဆုံးစွန်သောတစ်ခါတစ်ရံအိပ်ရာ၏ဦးခေါင်းတစ်ခု extension ကိုသောစင်ပေါ်အတူအစားထိုးနေကြပါတယ်။ ပရိဘောဂအားလုံးသည်အခြားပစ္စည်းများကိုပိုဖြစ်လိမ့်မည်။
ခေတ်သစ်စတိုင်လ်အတွက်အိပ်ခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအလှဆင်အင်္ဂတေသို့မဟုတ်နောက်ခံပုံ monophonic ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတိကျတဲ့အသံထွက်နှင့်ပင်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဝုဏ်ဖန်တီးနိုင်သည့်နှင့်အတူ plasterboard ၏ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ, သင့်လျော်သောနံရံများသည်။ အခန်း၏ဖြစ်နိုင်သောပျင်းစရာကောင်းကြည့်အိပ်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ် potted စက်ရုံနှင့်အတူအိုးတလုံးကိုကျော်ဆွဲထားပုံကွဲပြားရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, အဆင်ပြေသက်သာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းစတိုင်, မီးဖိုချောင်များအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ မြေတပြင်လုံးမီးဖိုချောင်ပရိဘောဂအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သင့်ငွေပမာဏဆောင်ကြဉ်းသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကောင်းသောအရသာ, Self-ဖူလုံရေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအလေးပေးဦးမည်သည့်အမျိုးမျိုးသောကရိယာကြိုဆိုသည်။
ခေတ်မီစတိုင်ပြည်ထဲရေးစတူဒီယိုမီးဖိုချောင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို neyarkimi accents တွေနဲ့တောက်ပသောအရောင်အဆင်းအတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇုန်ဆီသို့အာကာသအလင်းရောင်၏နည်းလမ်းများ, နံရံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ, မျက်နှာကျက်နှင့်ကြမ်းပြင်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင် space ၏ဒီဇိုင်းမှာသတ္တုနှင့်အတူသစ်သားပေါင်းစပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်ကြော့ရှင်း၏ပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်နှစ်သိမ့်ဖို့ထည့်ပါ။ မီးဖိုချောင်ပုံစံဒီဇိုင်းအတွက်ဖန်များအသုံးပြုမှုအလင်းနှင့် spaciousness နှင့်အတူအခန်းကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
မီးဖိုချောင်ဖက်ရှင်အတွက်နောက်ထပ်ဒြပ်စင် - အမြင့်ဆုံးထိုင်ခုံလုပ်ဖို့သို့မဟုတ်ကုလားထိုင်နှင့်အတူဘား။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး, အပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်အာကာသအဖြစ်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်မီးဖိုချောင်၏ချက်ပြုတ်၏ခွဲခြာနှင့်ထမင်းစားခန်းဧရိယာအဘို့ဤပရိဘောဂဒြပ်စင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ သေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်ဘား table ထဲမှာပင်ထမင်းစားခန်းစားပွဲပေါ်မှာကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအိမ်တော်၌, သင်ကျေးလက်နိုင်ငံ၏အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သောခေတ်မီစတိုင်အတွက်တစ်ဦးမီးဖိုနဲ့အတွင်းပိုင်းမီးဖိုချောင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ရီးရဲလ်ရုရှားမီးဖိုအာကာသအပူနှင့်ချက်ပြုတ်ဘို့သုံးနိုင်တယ်။ ဒါဟာအုပ်ကြွပ်, အလှဆင်အုတ်, ကြွေထည်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကြောကျခဲအုပ်ကြွပ်နှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်နှင့် Provence တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းစတိုင်အလှဆင်မူရင်းမီးဖိုချောင်, ကြည့်ရှုမည်။
တင်းကျပ်သော laconic ပုံစံများနှင့်ပုံစံမျိုးတစ်ဦးပြည့်စုံမရှိခြင်းနှင့်အတူအနည်းဆုံးနှင့်ရိုးရှင်း;
အရိပ်၏, အနက်ရောင်အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင် palette;
စတိုင် accessories များနိမ့်ဆုံး,
အမျိုးမျိုးသောပျေါလှငျနှင့် multilevel အလင်းရောင်များအသုံးပြုခြင်း။
အဖြူရောင်အရောင်ဒီ utilitarian အခန်းအထူးသဖြင့်ရေပန်းစားသည်။ ကြိုဆိုများနှင့်အရိပ်၏ပေါင်းစပ်ခြားနားပေမယ့်အလွန်အကျွံမိုနိုခရုမ်, ချည်မျှင်နှင့်အထည်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်တော်ပါတယ်အတွက်တောက်ပ accents တွေနဲ့ရောနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းနံရံများကို wear ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း, သတ္တုအုပ်ကြွပ်နှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ မူလက mosaic နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြွေအုပ်ကြွပ်နှင့်အတူအခန်းထဲရှိနံရံတန်းစီလှပါတယ်။ စတိုင်လမ်းကြောင်းသစ် Eco-style ကသစ်ပင်အောက်ရေချိုးခန်းထဲမှာအုပ်ကြွပ်၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်ထံမှလာ၏။
ခေတ်မီစတိုင်ကလေးတစ်ဦးရဲ့အခန်း၏အတွင်းပိုင်းအတွက်သဘောသဘာဝနှင့်သင့်ကလေးအတွက်၏တိကျသော features တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သေချာစေပါ, တစ်ချိန်တည်းမှာအဲဒါကိုလိင်ကဘာလဲဆိုတာအရေးမထားဘူး။ အနည်းငယ်ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကအခန်းအဖြစ်, သင်ကစားဧရိယာ၏အစီအစဉ်ကိုအထူးအာရုံစိုက်ရပေမည်။ အဆိုပါမွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးဗီရိုတစ်ခုအိပ်ရာ, တံခါးပိတ် box ကိုရင်ဘတ်သို့မဟုတ်ခြင်းတောင်း၏ပုံစံအတွက်ကစားစရာတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ရာအရပ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်တစ်ဉျြးကဉျြးအိပ်ရာသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။
ကလေးသူငယ်အခကျောင်းတွင်အသက်အရွယ်ရောက်ရှိပြီဆိုရင်, ကစနစ်တကျက၎င်း၏အလုပ်ကိုဧရိယာစုစည်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာဗေဒသူငယ်၏အပွငျအဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့စားပွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆင်ပြေကုလားထိုင်-Transformer, ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဧရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီရို - လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခနျးငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်နေရာတစ်နေရာဖြစ်သောအထက်အိပ်ရာ, အောက်ခြေမှဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်စီကအိပ်ရာ၏ဦးခေါင်းအနီးတွင်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အလှဆင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ရင်တောင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အာကာသရှိသည်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။
ဒီစတိုင်အလှဆင်ခန်းမ, အဘယ်သူမျှမနေရတယ်လို့နှင့်အကြီးအကျယ်ပရိဘောဂ: အားလုံးဒီဇိုင်းများဒီဇိုင်းအတွက်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အမှုအရာအကောင်းဆုံးတံခါးပိတ်ပုံးသို့မဟုတ် built-in စင်ပေါ်ထားနေကြသည်။ ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်အဆင်းအရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲအရောင် palette စင်္ကြံ။ အဆိုပါစင်္ကြံပြတင်းပေါက်အလွန်ရှားပါးပြီးကတည်းကထိုသို့အလင်းရောင်ရွေးချယ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဗဟိုပဲ့ချိတ်အပြင်သို့မဟုတ်ပါဝင်သော
ခေတ်မီစတိုင်အတွက်ပုဂ္ဂလိကအိမ်၏အတွင်းပိုင်းစင်္ကြံ၏မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံ၏ဒီဇိုင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့စင်္ကြံပါဝငျသညျ။ တူညီသောမြို့တမြို့တိုက်ခန်းမှာရှေ့အခန်းတစ်ခန်းအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။ White ကရတဲ့အရာတွေလမ်းပိုင်းမျက်နှာကြက်သို့မဟုတ်ခြယ်မျက်နှာပြင် - ခန်းမများအတွက်အကောင်းဆုံး option ကို။ ဝဲနေတဲ့တောက်ပတဲ့အရောင်တစ်ဦးအလင်း finish ကိုအပေါ်ကြီးစွာကြည့်ရှုမည် Wall ။ ဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်အဘယ်သူ၏ရိုးကိုအတုယူသစ်သား, အုတ်သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်တွေနဲ့အလှဆင်နေကြပါတယ်စင်္ကြံ, လှပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းအိမ်သာ - အခန်းသေးငယ်သည်, ဒါကြောင့်တောက်ပနှင့်သန့်ရှင်းသောလေထုဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သိမ့်အနည်းငယ် utilitarian အမြင်အာရုံအာကာသချဲ့ထွင်ရန်တတ်နိုင်သောအဖြူရောင်အရောင်ကို အသုံးပြု. အောင်မြင်နေသည်။ အလွန်အကျွံမြုံကိုရှောင်ရှားရန်, ရေချိုးခန်းအတွက်အသုံးပြုသင့်အသေးစားနှင့်မှိန်အသံထွက်ကြသည်။
မော်ဒန်စတိုင်အိမ်သာအတွင်းပိုင်းအပေါငျးတို့သ utilities လျပြားနောက်ကွယ်မှဝှက်ထားလျက်ရှိသောအကြံပြုထားသည်။ မူလကအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်များ, မျက်နှာကျက်နှင့်လ်တာနှင့်အတူအရာနှငျ့ဆနျ့ကငျြမီးခိုးရောင်နံရံများနှင့်အတူအိမ်သာအခန်း၏ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရှုမည်။ ဿုံဥပစာ၏ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်လေထုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သော, သစ်သားနှင့်ကျောက် imitation ။
တိုင်းပြည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်မြို့တိုက်ခန်းအတွင်းပြုပြင်မစတင်မီသင်တစ်ခုခုပေးထားအခန်းထဲမှာဖန်တီးချင်သောအရာကိုစတိုင်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အနာဂတ်အတွက်အိမ်ယာ၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်သင့်အရသာအကြားတစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အပေးအယူတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့။ သငျသညျရှေးခယျြသောဦးတည်ချက်များ၏လုံးဝအတိအကျကိုမျိုးပွားလိုက်မပေးသင့်ပါတယ်။ ကဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုအတိအကျပုံတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပေမယ့်ဒါဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ခေတ်မီစတိုင်အတွက်အိမ်တွင်း၏အတွင်းပိုင်းကိုဖန်တီးရန် သာ. ကောင်း၏။
ခေတ်သစ်ဂန္ရဲ့ style အတွက်အတွင်းပိုင်း
ဒီစတိုင်၏အခြေခံအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့လွတ်လပ်မှု, လျှပ်နှင့် garmonii.Sovremenny ဂန္စတိုင်၏အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်းစပျစ်သီးနှင့်လက်ရှိဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပေါင်းစပ်ဆိုလို။ အဆိုပါရိုးရှင်းနှင့် symmetry ပရိဘောဂ, အေးဆေးတည်ငြိမ် Beige နှင့်အညိုရောင်အရိပ်၏နေရာချထားအတွက်အဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ဧည့်ခန်း, အိပ်ခန်းသို့မဟုတ်ထမင်းစားခန်းထဲမှာအချိန်ဇာတ်ကောင်ပေါ်လွင်စေပါသည်။ ဂန္များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်ပရိဘောဂဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခင်းကျင်းထဲကနေကိုဖန်ဆင်းမော်ဒယ်လှပသောပုံစံမျိုးစုံ, သင်၏အခန်းတစ်ခန်းကြော့နှင့်စတိုင်ပါစေ။
အရောင်နဲ့တူဒါကစတိုင်: နက်ရှိုင်းသောစပျစ်ရည်, မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ပြာ, Matt နှင့်ပင် smoky အနက်ရောင်အရိပ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်သို့မဟုတ်ပရိဘောဂအတွက်ပြီးနှင့်ပုံစံမျိုးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အညီအမျှကောင်းစွာကြည့်ရှုမည်။ တစ်ဝဲသို့မဟုတ်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်းအတိုင်းအခန်း၏ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းကိုမှတိကျတဲ့စကားရပ်ပေးသောအခြားတောက်ပနှင့် Matt မျက်နှာပြင်အကြံပေး risunkom.Spetsialisty ကြီးမားတဲ့နောက်ခံပုံများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်အတွင်းပိုင်းခေတ်မီဒီဇိုင်းဂန္တစ်ဦးစတိုင်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လူကြိုက်များသည်ယနေ့ရိုးရှင်းသောစတိုင်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြားနေအရိပ်နှင့်အသေးစား volumes ကို၏ဒြပ်စင်ကိုဖန်တီးရန်အရာနှင့်အတူသဘာဝအလျောက်နှင့်စက်မှုကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ အနည်းဆုံးတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်စတိုင်ဘားနှင့်မြင့်အဆောက်အဦးများတွင်တစ်မြို့တိုက်ခန်းကနေအိမ်၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခန်းပေါင်းပရိဘောဂတွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သူတို့ကကျယ်ဝန်းနှင့်အလင်း၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ partitions ကိုမရှိဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း element တွေအမျိုးမျိုးဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်: ဖန်ခွက် partitions ကို, သငျ့လျြောသောအလင်းရောင်, ပစ္စည်းများ texture အမျိုးမျိုး။
အတွင်းပိုင်းအတွက်ခေတ်မီရိုးရှင်းသောစတိုင်နံရံပန်းချီသို့မဟုတ်အလှဆင်အင်္ဂတေနှင့်သူတို့ကိုဖုံးအုပ်အကြံပြုထားသည်။ ဒီအခန်းထဲမှာမျက်နှာကျက်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းအတွက်အလှဆင်သို့မဟုတ် multi-level ကိုဖွဲ့စည်းပုံ mount ။ ကြမ်းပြင်တွင်တစ်ဦးအလင်း tile ကို, ပုဆိုး tile ကိုသို့မဟုတ်သစ်သားအလောင်းတော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိဘောဂ built-in နားကြပ်ရဲ့ပုံစံကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏ထုတ်လုပ်မှု, သတ္တုပေါင်းစပ်, သစ်သား, ဖန်ခွက်သည်။
ဒါကစက်မှုဇုန်စတိုင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ခန်းသည်, မဆို partitions ကိုမရှိဘူး, အပြည့်အဝပွင့်လင်းကြသည်။ အခန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးသောပိုက်, ပန်းရံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအင်္ဂတေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအားလုံးလိုက်ဖက်စွာ Ultra-ခေတ်မီကရိယာ, chrome မျက်နှာပြင်များ, ဖန် partitions ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ပရိဘောဂင်း၏တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်လည်းအာကာသဒြပ်စင်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်သာသုံးနိုင်တယ်။ ခေတ်မီခနျး-စတိုင်အတွက်အလွန်အထင်ကြီးအတွင်းပိုင်းအဖြူရောင်မီးဖိုချောင်ကြည့်ရှုမည်, အရာ၏နံရံတစ်အုတ်သို့မဟုတ်ကျောက်အလှဆင်နေကြပါတယ်။ အခန်းအတွင်းရှိပရိဘောဂအရွယ်အစားသေးငယ်သည်လျှင်, ကရိယာကြီးမားကျယ်ဝန်းဖြစ်ရမည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့နှင့်ရိုးရှင်း၏စကင်ဒီနေးစတိုင်, ကြိုးနှံနှင့်လွယ်ကူခြင်း။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အလှအပ, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့် cosiness များအတွက်အလိုဆန္ဒမှဂြိုလ်သားမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအခန်းပေါင်းသဘာဝအလင်းများများရှိသင့်တယ်။ နံရံနှင့်မျက်နှာကျက်ချည်မျှင်နှင့်အထည်, အပင်, ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်မိသားစုဓာတ်ပုံများ၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုတောက်ပဝဲ၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ထားတဲ့အဖြူအရောင်အတွက်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ပရိဘောဂများနှင့်အလှဆင်သာကိုသဘာဝသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အရည်အသွေးကိုတုပများအတွက်ပစ္စည်းများ။
ခေတ်မီစတိုင်စကင်ဒီနေးအတွက်ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းကိုဧည့်ခန်းကိုမကြာခဏထမင်းစားခန်း, လေ့လာမှုနှင့်အတူအိပ်ခန်းနှင့်အတူမီးဖိုချောင် pooling ပါဝငျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောစကင်ဒီနေးတိုက်ခန်းမီးဖိုချောင်-စတူဒီယိုထဲမှာအများဆုံးအလေ့အထများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မှောင်မိုက် accents တွေနဲ့ပေါင်းစပ်အတွက်အခန်းတစ်ခန်း၏ဒီဇိုင်းမှာတောက်ပတဲ့အရိပ်ပင်သေးငယ်တဲ့နေရာများအမြင်အာရုံတိုးချဲ့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
အတွင်းပိုင်းအတွက်ခေတ်မီစတိုင်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ဒါဟာရဲစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အလွန်အဓိပ္ပါယ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုင်းများ, ရိုးရှင်းသော laconic ပုံစံများ, တောက်ပအရောင် accents တွေနဲ့မိုနိုခရုမ်။ ဒါဟာအီဂျစ်စတိုင်သို့မဟုတ် Rococo တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းဒြပ်စင်အတွက်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ မူလကအချို့ဂန္ features တွေနှင့်အတူမြေထဲပင်လယ်စတိုင်ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းကြည့်ရှုမည်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏ပုံမှန် features တွေနှင့်အတူ familiarized တော်မူပြီးမှ, သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်တစ်ဦး, ပျူငှါနွေးထွေးသောအဆင်ပြေနှင့်စတိုင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Provence ရဲ့ style အတွက်ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း
အသေးစားစားပွဲပေါ်မှာ - ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း attribute ကို
အဆိုပါ loggia အတွက်အပူကြမ်းပြင်
အမျိုးသမီးကလျမီဒီရာ - ၏အကြောင်းတရားများ
အသေးစား fontanelle မွေးကင်းစ
W မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ couture ရိုက်ကူးသို့ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
Kim Kardashian ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲရစ်အတွက်လုယက်မှုပြီးနောက် psoriasis ၏ exacerbation အကွောငျးပွော
အကျိတ်အမှတ်အသားများ၏ analysis - ကဘာလဲ?
ရေကူးဝတ်စုံ - နွေရာသီ 2016
ဂျေရုဆလင် artichoke ရည် - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး